Lakandranon’i Dabara: miankina amin’ny velaran-tany voatondraka ny vola miditra | NewsMada
Lakandranon’i Dabara: miankina amin’ny velaran-tany voatondraka ny vola miditra
Tsy nahomby ny fitantanan’ny federasiona ny lakandrano Dabara, any Morondava, faritra Menabe, ka nankinina amina komity vonjimaika ny fitantanana izany ankehitriny. Komity ahitana ny governora, avy amin’ny sampandraharaha fambolena sy fiompiana, sy mpitandro filaminana. Hatomboka ny asa fanarenana.
Mbola tsy tomombana ara-dalàna akory any Menabe, ny famatsian-drano avy amin’ny lakandrano Dabara manondraka ny velaran-tany volena tsy latsaky ny 6 000 ha, faritra ambony sy ambany, misy koa ny faritra anelanelany. Na izany aza, azo lazaina fa milamina amin’ny ankapobeny ny fitantanana ataon’ny komity vonjimaika. Isan-taona, misy fe-potoana fanaovana fikojakojana ny lakandrano, sy ny fandaminana rehetra, ary samy manaiky izany izao ny mpamboly sy ny komity mpitantana vonjimaika. Koa amin’ny 3 novambra 2020 izao ny hanombohana ny asa fanajariana ny lakandrano Dabara.
Ankoatra ny lemaka Alaotra, i Marovoay, sy i Mangoky, anisan’ny lemaka iray lehibe eto Madagasikara ny velaran-tany tondrahina avy amin’ny lakandron’i Dabara. Tsy nahomby ny federasiona teo amin’ny fitantanana, manampy izany ny fitombon’ny velaran-tany tsy nahazoan-dalana, izay tsy mampirindra ny famatsian-drano manondraka tanimbary, ary ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro mampisy fahasahiranana.
Miankina amin’ny velaran-tany voatondraka anefa ny toekarena amin’ny ankapobeny, indrindra ny vola miditra isan-tokantrano. Miankina amin’ny velarana voatondraka ny fiveloman’ny olona any amin’ny kaominina maro, Analaiva sy i Bemanonga, ao amin’ny distrikan’i Morondava; i Mahabo, i Bezezika, Ampanihy, Analamitsivalana, sy Ankilivalo ao amin’ny distrikan’i Mahabo.
Tetikasa iray lehibe azo avy amin’ny tohodranon’i Dabara koa ny famatsiana herinaratra, fiaraha-miasan’ny fanjakana sy tsy miankina. Ny fokontany rehetra ao Ankilizato sy ao Morondava, toy izany koa ny any Mahabo. Misy 20 ny loharano mety hahazoana angovo 300 hatramin’ny 500 Kw isanisany, afaka mamatsy ny tinady rehetra ankehitriny amina herinaratra, anisan’izany ny tanànan’i Morondava.